Mpanamboatra sy mpamatsy solosaina PCB SMT fivoriambe ao China | Kangna
SMT no fanafohezana ny Surface Mounted Technology, ny haitao malaza indrindra ary ny fizotrany eo amin'ny sehatry ny fivorian'ny elektronika. Ny circuit électronics Surface Mount Technology (SMT) dia antsoina hoe Surface Mount na Surface Mount Technology. Izy io dia karazana haitao fivorian'ny Circuit izay mametaka singa mitarika tsy mitarika na fohy mitarika (SMC / SMD amin'ny teny sinoa) eo ambonin'ny Printed Circuit Board (PCB) na ny atin'ny substrate hafa, ary avy eo mandroso sy mivory amin'ny alàlan'ny welding welding na milentika welding.
Amin'ny ankapobeny, ny vokatra elektronika ampiasainay dia vita amin'ny PCB miampy capacitors, resistors ary singa elektronika hafa arakaraka ny kisary circuit, noho izany ny karazana fitaovana elektrika dia mila teknolojia fanodinana chip SMT isan-karazany hanodinana.
Ny singa enti-miasa ao amin'ny SMT dia misy: fanontana amin'ny efijery (na famoahana), fametrahana (fanasitranana), fametahana tariby, fanadiovana, fitsapana, fanamboarana.
1. Fanontam-pirinty: Ny fiasan'ny fanontana amin'ny efijery dia ny famoahana ny paty solder na ny adhesive patch ao amin'ny pad solder an'ny PCB hiomanana amin'ny fametahana ireo singa. Ny fitaovana ampiasaina dia ny milina fanontam-pirinty (milina fanontam-pirinty), eo amin'ny faran'ny lohan'ny famokarana SMT.
2. Famafazana lakaoly: mandatsaka lakaoly amin'ny toeran'ny birao PCB izy ary ny asany lehibe dia ny manamboatra singa ao amin'ny tabilao PCB. Ny fitaovana ampiasaina dia ny milina mpaninjara, hita eo amin'ny faran'ny tsipika famokarana SMT na ao ambadiky ny fitaovana fitiliana.
3. Tendrombohitra: Ny asany dia ny fametrahana ny votoatin'ny fivorian'ny fivondronana araka ny marina amin'ny toeran'ny PCB. Ny fitaovana ampiasaina dia milina fametrahana SMT, miorina ao ambadiky ny milina fanontam-pirinty ao amin'ny tsipika famokarana THE SMT.
4. Fanasitranana: Ny asany dia ny mandronika ny adhesive SMT mba hahafahan'ny mpiorina fivondronana ambony sy ny birao PCB hifikitra tsara. Ny fitaovana ampiasaina dia ny fanasitranana lafaoro, miorina ao ambadiky ny tsipika famokarana SMT SMT.
5. Reflow welding: ny asan'ny lasitra reflow dia ny manalefaka ny piraon'ny solder, ka mifamatotra tsara ireo singa mpiangona ambony sy birao PCB. Ny fitaovana ampiasaina dia lafaoro welding, izay hita ao amin'ny tsipika famokarana SMT ao ambadiky ny milina fametrahana SMT.
6. Fanadiovana: Ny asany dia ny fanalana ny reside welding toy ny flux amin'ny PCB mivondrona izay manimba ny vatan'olombelona. Ny fitaovana ampiasaina dia ny milina fanadiovana, ny toerana tsy azo amboarina, azo atao an-tserasera, na tsy an-tserasera.
7. Detection: Izy io dia ampiasaina hamantarana ny kalitaon'ny welding sy ny kalitaon'ny fivoriambe PCB tafavory. Ny fitaovana ampiasaina dia misy vera fanamafisam-peo, mikraoskaopy, fitaovana fitsapana an-tserasera (TIK), fitaovana fitsapana fanjaitra manidina, fitsapana optika mandeha ho azy (AOI), rafitra fitiliana taratra X, fitaovana fitiliana fampiasa, sns. Ny toerana dia azo alamina mifanaraka amin'izay ampahany amin'ny tsipika famokarana mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fanaraha-maso.
8.Fanamboarana: ampiasaina hanamboarana ny PCB izay hita fa misy lesoka. Ny fitaovana ampiasaina dia vy vy, fanamboarana toeram-piasana, sns.
Previous: birao fananganana keramika vita amin'ny volamena mitokana tokana
Manaraka: mihodina haingana prototype volamena plating PCB miaraka amin'ny lavaka milentika Counter